Kuvalwe ingxenye yomgwaqo u-N2 ngenxa yombhikisho | News24
Kuvalwe ingxenye yomgwaqo u-N2 ngenxa yombhikisho
Cape Town – Umbhikisho waseKhayelitsha uholele ekutheni kuvalwe u-N2 ngaseMacassar.
Umbhikisho usuphazamise kakhulu ukuhamba kwezimoto eziphuma eSomerset West ziya edolobheni.
Nasendaweni kubikwa ukuthi kumnyama ngenxa yentuthu njengoba kushiswa amathayi ezimoto.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe owesifazane kutholakala impahla eyebiwe
Okhulumela amaphoyisa omgwaqo esifundazweni uKenny Africa uthi: “Okwamanje, amaphoyisa asendaweni yesehlakalo. Isimo sisalawuleka, kodwa abantu kudingeka basebenzise eminye imigwaqo ngoba lona uvaliwe.”
URichard Coleman - wedolobha laseKapa - uthe sekushayisane izimoto eziyisithupha kule ndawo kodwa iziphathimandla sezikhona endaweni yesigameko.
Ukushayisana kwalezi zimoto kulo mgwaqo, kulandela izingozi zangempelasonto okushone kuzo abantu abayisikhombisa eKapa.